महाद्वीपीय बहाव को सिद्धान्त: विशेषताहरु, उत्पत्ति र खोजहरु | नेटवर्क मौसम विज्ञान
जर्मन पोर्टिलो | 06/04/2021 10:02 | अद्यावधिक गरियो 07/04/2021 12:39 | Ciencia
विगतमा महाद्वीपहरू करोडौं वर्षसम्म स्थिर रहन थाल्थे। केहि पनि थाहा थिएन कि पृथ्वीको क्रस्ट प्लेटहरू मिलेर बनेको थियो जुन आवरणको कन्भर्भेन्ट धारालाई धन्यवाद दिन्छ। यद्यपि वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेजनरले प्रस्ताव गरे महाद्वीपीय बहाव को सिद्धान्त। यो सिद्धान्तले भन्यो कि महाद्वीपहरु करोडौं बर्ष देखि खसेका थिए र अझै पनी उनीहरु त्यसो गरिरहेका थिए।
के आशा गर्न सकिन्छ बाट, यो सिद्धान्त विज्ञान र जियोलोजी को दुनिया को लागी एक क्रान्ति थियो। के तपाईं महाद्वीपीय बहावको बारेमा सबै जान्न र यसको रहस्य पत्ता लगाउन चाहनुहुन्छ?
1 महाद्वीपीय बहावको सिद्धान्त
2 प्रमाण र प्रमाण
2.1 पालेमाग्नेटिक परीक्षण
2.2 जैविक परीक्षण
2.3 भूवैज्ञानिक परीक्षण
2.4 प्यालेओक्लिमैटिक परीक्षण
3 महाद्वीपीय बहाव को अवस्था
4 जीवित वस्तुहरूको वर्तमान वितरण
महाद्वीपीय बहावको सिद्धान्त
यो सिद्धान्त बुझाउँछ प्लेटहरूको हालको चालमा यसले महाद्वीपलाई निरन्तरता दिन्छ र त्यो लाखौं बर्षमा सार्दछ। पृथ्वीको सम्पूर्ण भूगर्भीय इतिहासमा महाद्वीपहरू सधैं एकै ठाउँमा हुँदैनन्। त्यहाँ प्रमाणहरूको श्रृंखला छ जुन हामी पछि हेर्नेछौं जसले Wegener लाई आफ्नो सिद्धान्त खण्डन गर्न मद्दत पुर्‍यायो।
आन्दोलन आवरणबाट नयाँ सामग्रीको लगातार गठनको कारण हो। यो सामग्री समुद्री क्रस्टमा सिर्जना गरिएको छ। यस तरिकाले, नयाँ सामग्रीले विद्यमानमा बल प्रयोग गर्दछ र महाद्वीपहरू शिफ्ट गर्नका लागि।
यदि तपाईंले सबै महाद्वीपको आकारलाई राम्ररी हेर्नुभयो भने यस्तो देखिन्छ कि अमेरिका र अफ्रिका एकजुट भएका छन्। यसमा दार्शनिकले याद गरे फ्रान्सिस बेकन वर्ष १1620२० मा। यद्यपि उनले कुनै पनि सिद्धान्त प्रस्ताव गरेन कि यी महादेशहरू विगतमा सँगै थिए।
पेरिसमा बस्ने एक अमेरिकी एन्टोनियो स्नाइडरले यसलाई उल्लेख गरेका थिए। १ 1858 XNUMX मा उनले महादेशहरू अघि बढ्न सक्ने सम्भावना देखाए।
यो १ 1915 १ in मा नै थियो जब जर्मन मौसमविद् अल्फ्रेड वेग्नरले आफ्नो पुस्तक प्रकाशित गरे "महादेश र महासागरहरूको उत्पत्ति"। यसमा उनले महाद्वीपीय बहावको सम्पूर्ण सिद्धान्त उजागर गरे। तसर्थ, Wegener सिद्धान्त को लेखक मानिन्छ।
पुस्तकमा उनले वर्णन गरे कि कसरी हाम्रो ग्रहले एक किसिमको उपमहाद्वीप आयोजना गरेको थियो। त्यो हो, आज हामीसँग रहेका सबै महादेशहरू एकै पटक मिलेर बनेका थिए। उनले त्यो सुपरकन्टिनेंट भने Pangea। पृथ्वीको आन्तरिक शक्तिहरूको कारण, Pangea फ्रैक्चर हुन्छ र टुक्रा टुक्रा भएर टाढा जान्छ। लाखौं वर्ष बितिसकेपछि महादेशहरूले उनीहरूले आज जुन ओहदा लिइरहेका हुन्छन्।
प्रमाण र प्रमाण
यस सिद्धान्तका अनुसार भविष्यमा लाखौं वर्ष पछि महादेशहरू फेरि भेट्ने छन्। प्रमाण र प्रमाणको साथ यो सिद्धान्त प्रदर्शन गर्न के महत्त्वपूर्ण बनायो।
पहिलो प्रमाण जसले तिनीहरूलाई विश्वास दिलायो त्यो प्यालो म्याग्नेटिजमको स्पष्टीकरण हो। पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्र यो जहिले पनि समान उन्मुखीकरणमा हुँदैन। जहिले पनि चुम्बकीय क्षेत्र उल्टो छ। अब के हुन्छ चुम्बकीय दक्षिण ध्रुव उत्तरमा प्रयोग भयो, र यसको विपरित। यो ज्ञात छ किनकि धेरै उच्च धातु सामग्री चट्टानहरूले हालको चुम्बकीय ध्रुवको दिशामा अभिमुखीकरण लिन्छन्। चुम्बकीय चट्टानहरू भेट्टाए जसको उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुवतिर औंल्याउँछ। त्यसोभए, प्राचीन समयमा यो वरिपरि अन्य तरिकाले भएको हुनुपर्दछ।
यो paleomagnetism १ 1950 s० सम्म मापन गर्न सकिँदैन। यो मापन गर्न सम्भव भए पनि, धेरै कमजोर नतीजा लिएको थियो। अझै, यी मापनहरूको विश्लेषणले महादेशहरू कहाँ थियो भनेर निर्धारण गर्न सफल भयो। तपाईं चट्टानको झुकाव र उमेर हेरेर यो भन्न सक्नुहुन्छ। यस तरिकाले, यो देखाउन सकिन्छ कि सबै महादेशहरू एकजुट थिए।
एक भन्दा बढी अचम्ममा परेका अन्य परीक्षणहरू जैविक थिए। दुबै जनावर र बोटबिरुवाका प्रजातिहरू विभिन्न महादेशमा पाइन्छन्। यो अकल्पनीय कुरा हो कि प्रजातिहरू जुन प्रवासी होइनन् एक महादेशबाट अर्को महादेशमा सर्न सक्छन। जसले एक समय मा उही महाद्वीपमा थिए भनेर सुझाव दिन्छ। महाजातिहरू सर्दै जाँदा समय बित्दै जाँदा प्रजातिहरू तितर बितर हुँदै गइरहेका थिए।
साथै, पश्चिमी अफ्रिका र पूर्वी दक्षिण अमेरिकामा उस्तै प्रकार र उमेरको रक संरचनाहरू भेटिए।
एउटा परीक्षणले यी परीक्षणहरूलाई उक्सायो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका, अन्टार्कटिका, भारत र अष्ट्रेलियामा उही पातलो फर्नको जीवाश्मको खोज। कसरी फर्नको समान प्रजातिहरू बिभिन्न ठाउँहरूबाट हुन सक्छन्? यो निष्कर्षमा पुगेको छ कि तिनीहरू सँगै Pangea मा बस्ने थियो। लिस्ट्रोसौरस सरीसृप जीवाश्महरू दक्षिण अफ्रिका, भारत र अन्टार्कटिका, र मेसोसौरस जीवाश्म ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा पनि भेटिए।
दुबै वनस्पति र जीव जन्तुहरू समान समयको लागि सँगसँगै सम्बन्धित थिए जुन समयको साथ बिग्रेको थियो। जब महादेश बीच दूरी धेरै ठूलो थियो, प्रत्येक प्रजाति नयाँ परिस्थितिमा अनुकूलित।
यो पहिले नै उल्लेख गरिएको छ कि किनाराहरू अफ्रिका र अमेरिकाको महाद्वीपीय तखताहरू सँगै फिट हुन्छन्। र तिनीहरू एक पटक थिए। थप रूपमा, तिनीहरूसँग केवल समान पजल आकार छैन, तर दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप र अफ्रिकीको हिमाल श्रृंखलाहरूको निरन्तरता पनि छ। आज अटलान्टिक महासागर यी पर्वत श्रृंखलाहरूलाई अलग गर्ने जिम्मामा छ।
मौसमले पनि यो सिद्धान्तको व्याख्या गर्न सहयोग पुर्‍यायो। एउटै इरोजिभ बान्कीको प्रमाण बिभिन्न महादेशमा भेटियो। वर्तमानमा प्रत्येक महादेशमा वर्षा, बतास, तापमान इत्यादिको आफ्नै शासन छ। जे होस्, जब सबै महाद्वीपहरू एक बने, त्यहाँ एक एकीकृत मौसम थियो।
थप रूपमा, उही मोरेन भण्डारहरू दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, भारत, र अष्ट्रेलियामा फेला परेको छ।
महाद्वीपीय बहाव को अवस्था
महाद्वीपको बहाव ग्रहको ईतिहास भर भइरहेको छ। महादेशमा महादेशको स्थिति अनुसार जीवन एक किसिमले वा अर्को तरिकाले आकार दिएको छ। यसको मतलब यो छ कि महाद्वीपीय बहावको अधिक चिह्नित चरणहरू छन् जुन महाद्वीपहरूको गठनको सुरूवात गर्दछ र यसको साथमा जीवनको नयाँ तरिकाहरू। हामीलाई याद छ कि जीवित प्राणीहरूले वातावरणसँग अनुकूलन हुनु आवश्यक छ र तिनीहरूको मौसम अवस्थाको आधारमा विकासलाई बिभिन्न विशेषताहरू द्वारा चिह्नित गरिएको छ।
हामी विश्लेषण गर्ने छौं जुन महाद्वीपीय बहावको मुख्य चरणहरू हुन्:
करीव १.१ अरब वर्ष पहिले: पहिलो महामहाद्वीपको गठन रोडिनिया भन्ने ग्रहमा भयो। लोकप्रिय विश्वासको विपरित, Pangea पहिलो थिएन। तैपनि, अन्य पुरानो महाद्वीपहरूको सम्भावनालाई इन्कार गरिएको छैन, यद्यपि पर्याप्त प्रमाण छैन।
करीव १.१ अरब वर्ष पहिले: रोडिनियाले झण्डै १ 150 करोड वर्ष लिए र दोस्रो सुपरमहाद्वीपले पन्नोटिया कहलाइयो। यसको छोटो अवधि थियो, केवल 60 करोड वर्ष।
करीव 540० मिलियन वर्ष पहिले, Pannotia गोंडवाना र प्रोटो-लौरसियामा खण्डित भयो।
करीव १.१ अरब वर्ष पहिले: प्रोटो-लौरसिया new नयाँ महादेशहरुमा लरेन्शिया, साइबेरिया र बाल्टिकमा विभाजित गरिएको थियो। यस तरीकाले यस प्रभागले २ नयाँ समुद्री महासागरहरू उत्पन्न गर्‍यो जसलाई Iapetus र खन्ती भनिन्छ।
करीव १.१ अरब वर्ष पहिले: अभालोनिया गोंडवानाबाट अलग भयो (संयुक्त राज्य अमेरिका, नोभा स्कोटिया र इ England्गल्यान्डको भूमि। बाल्टिक, लरेन्टीया र अभालोनियाको आपसमा युरेमेरिका गठन भयो।
करीव १.१ अरब वर्ष पहिले: त्यहाँ केवल दुई ठूला महाद्वीपहरू थिए। एकातिर, हामी Pangea छ। यो लगभग २२2 मिलियन वर्ष पहिले अस्तित्वमा थियो। Pangea एकल उपमहाद्वीपको अस्तित्व थियो जहाँ सबै जीवित प्राणीहरू फैलिए। यदि हामी भौगोलिक समय मापन हेर्छौं, हामी यो देख्छौं कि यो महामहाद्वीप पर्मियन कालमा अस्तित्वमा थियो। अर्कोतर्फ, हामीसँग साइबेरिया छ। दुबै महाद्वीपहरू पानथलासा महासागरले घेरिएका थिए, यो एक मात्र सागर थियो।
लौरसिया र गोंडवाना: Pangea को बिच्छेदको परिणाम स्वरूप, लौरसिया र Gondwana गठन गरियो। अन्टार्कटिका पनि ट्राएसिक अवधिभरि गठन हुन थाल्यो। यो २०० मिलियन वर्ष अघि भएको थियो र जीवित प्राणीहरूको प्रजातिहरूको भेदभाव हुन थाल्यो।
जीवित वस्तुहरूको वर्तमान वितरण
यद्यपि एकपटक महादेशहरू छुट्याएपछि प्रत्येक प्रजातिले क्रमविकासको नयाँ शाखा लिए, त्यहाँ विभिन्न महाद्वीपमा समान सुविधाहरू भएका प्रजातिहरू छन्। यी विश्लेषणहरूले अन्य महादेशका प्रजातिहरूमा आनुवंशिक समानता राख्छ। तिनीहरू बीचको भिन्नता यो हो कि तिनीहरू नयाँ सेटिंग्समा आफूलाई फेलाएर समयको साथ विकसित भएका छन्। यसको एउटा उदाहरण हो बगैंचा घोंघा जुन दुबै उत्तरी अमेरिका र युरेसियामा फेला परेको छ।
यी सबै प्रमाणहरूको साथ, Wegener आफ्नो सिद्धांत रक्षा गर्न को लागी प्रयास गरे। यी सबै तर्कहरू वैज्ञानिक समुदायलाई धेरै मनपर्‍यो। उसले वास्तवमै एउटा यस्तो ठूलो भेट्टाएको थियो जुन विज्ञानमा सफलताको लागि अनुमति दिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Ciencia » महाद्वीपीय बहाव को सिद्धान्त
मलाई यो मनपर्दछ, मलाई लाग्छ सिद्धान्त एकदम राम्रो छ र मलाई लाग्छ कि अमेरिका र अफ्रिका एकजुट भएको हुनुपर्छ किनकि यो पजल जस्तो देखिन्छ। 🙂